0 Friday March 13, 2020 - 10:05:40
Waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay duqeyn xagga cirka ah oo diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay dhowaan ka geysteen deegaan katirsan gobolka Sh/Hoose.
0 Friday March 13, 2020 - 08:46:11
Wararka ka imaanaya wadanka Ciraaq ayaa sheegaya in duqeymo laayaan ah lagu beegsaday saldhigyo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad Shiico ah kuwaas oo xiriir laleh dowladda Iiraan.
0 Thursday March 12, 2020 - 08:58:02
Xoogaga Al Shabaab ayaa markale guluf dagaaleed hor leh ku qaaday ciidamada shisheeyaha AMISOM iyo maleeshiyaadka dowladda Federaalka ee ku sugan deegaanno iyo degmooyin katirsan Sh/Hoose.
0 Wednesday March 11, 2020 - 09:46:05
Faah faahin ayaa kasoo baxaysa duqeyn bahalnimo ah oo ay shalay diyaaradaha Mareykanku u geysteen gaari caasi ah oo shacab saarnaa islamarkaana ka carraabayay gobolka Shabeelaha Hoose kuna sii jeeday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
0 Wednesday March 11, 2020 - 08:06:02
Gambiya waa dal dhaca galbeedka qaaradda Africa, waxa uu leeyahay keymo ballaaran oo ay ka baxaan geedaha dhaadheer, haseyeeshe waxay hadda isku bedeleen goobo saxaro lama degaan ah, kadib markii la jaray geedahaas.
0 Tuesday March 10, 2020 - 19:21:34
Warar horudhac ah ayaa kasoo baxaya duqeyn wuxuushnimo ah oo ay diyaaradaha dagaalka ee Mareykanku ay galabta ka geysteen Sh/Hoose kuna beegsadeen gaari ay saarnaayeen dad rayid ah oo kusii jeeday magaalada Muqdisho.
0 Tuesday March 10, 2020 - 17:29:34
0 Tuesday March 10, 2020 - 17:18:15
Abey Axmed oo ah ra'iisalwasaaraha dalka Itoobiya ayaa todobaadkan ku faanay in ay guul ka gaareen dagaalkii dhacay sannadihii 1977-78kii, kaas oo dhexmaray dawladda Itoobiya iyo dawladdii Soomaaliya.
0 Tuesday March 10, 2020 - 07:41:12
0 Monday March 09, 2020 - 10:31:37
Markii ugu horraysay jamaacada Jihaadiga Nusratul Islaam Walmuslimiin ee ka dagaallanta galbeedka qaaradda Afrika ayaa ka hadashay kacdoonnada shacbiga ah ee ka socda wadanka Maali iyo baaqyada ku aaddan in wadahadal lalagalo xukuumadaha mandiqadda.
0 Saturday March 07, 2020 - 12:28:15
Ilo wareedyo diblumaasiyadeed ayaa xaqiijinaya in dowladda Itoobiya ay uyeeratay qaar badan kamid ah safiiradeeda ufadhiyay wadamada caalamka sabab aan illaa iyo hadda la shaacin.
0 Wednesday March 04, 2020 - 10:04:51
0 Monday March 02, 2020 - 21:33:33
Sheekh Nuur Macallin Cabdi Raxmaan oo kamid ah culumaa'udiinka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay cudurka dilaaga Carona ee caalamka kusii faafiya.
0 Sunday March 01, 2020 - 12:00:08
Hoggaanka Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa war rasmi ah kasoo saaray heshiiskii taariikhiga ahaa ee ay lagaleen dowladda Mareykanka ee duullanka ku qaadday wadankaas waqti hadda laga joogo 19 sanadood ka hor.
0 Tuesday February 25, 2020 - 18:09:26
Waxaa maanta magaalada Al Qaahira ee dalka Masar ku geeriyooday Max'med Xusni Mubaarak oo kamid ahaa hoggaamiyaasha dawaaqiidda Carabta ee madaxda adag.
0 Monday February 24, 2020 - 20:26:59
Wararka ka imaanayo dalka Ethiopia ayaa sheegaya in Bomb gacmeed lagu weeraray iskusoo bax ay dhigayen taageerayaasha Abiy Axmed kaas oo ka dhacay Magalada Ambo ee dhacda koofurta wadankaasi.
0 Visits: 1665 | Monday February 24, 2020 - 12:12:26
Cali Mahdi Max'med oo kamid ahaa hoggaamiya kooxeedyadii caanka ahaa dalka Soomaaliya ayaa markii ugu horraysay ka dhawaajiyay in dowladda Federaalka ee hadda jirta ay tahay dowlad ay leedahay Itoobiya.
0 Saturday February 22, 2020 - 20:54:17
Xafiiska warfaafinta Xarakada Al Shabaab ayaa faafiyay qeybta labaad ee sawirrada dagaalkii khasaaraha badan dhaliyay ee dhowaan ka dhacay saldhigga ciidanka dowladda ee deegaanka Ceelsaliini ee duleedka magaalada Marka.
0 Saturday February 22, 2020 - 14:00:17
Faah faahin ayaa kasoo baxaysa socdaal uu maalmo ka hor magaalada Hargeysa ku tegay Wasiirka Maaliyadda Itoobiiya Axmad Shidde.
0 Saturday February 22, 2020 - 13:44:09
Mas'uuliyiinta Xisbiyada mucaaradka Soomaaliya ayaa eedayn kulul ujeediyay dowladda uu madaxda ka yahay Max'med Cabdullaahi Farmaajo.
0 Friday February 21, 2020 - 20:28:23
0 Friday February 21, 2020 - 14:27:40
Sida la ogyahay qaran kasta oo dunida ka taagani waxa uu leeyahay mabda' iyo u jeeddo u adeega danaha shacabkiisa iyo himiladooda fog. Haddaba waa in la ogaadaa in dunida casriga ah lagu tartamayo dhisidda maamul ilbaxnimo ay lafdhabar u tahay waxa la isku hayaana waa diin iyo dal.
0 Tuesday February 18, 2020 - 12:17:19
Dalka Indonesia ugu yaraan 300 oo qof ayaa lagusoo waramayaa in ay qaateen diinta Islaamka kadib marki ay kasoo tageen Madahabtii Kufriga ahaa ee ay kujireen, waxaana lagusoo bandhigay Masjid ku yaala Jaziirada Sulawesi ee dhacda bartamaha wadankaasi.
0 Tuesday February 18, 2020 - 11:07:11
Xilli dalka Soomaaliya oo dhan si weyn looga hadal hayo qariidadda uu baahiyay Abiy Axmed iyo safarka la sheegay in uu Farmaajo ku geynayo magaalada Hargeysa ayaa waxaa Wasiirka Warfaafinta ee DFS Maxamad Cabdi Xayir Maareeye kasoo baxay hadal lama filaan ah oo shaki badan abuuray.
0 Monday February 17, 2020 - 12:05:58
Fagaara weyn oo kuyaal degmada Saakoow ee gobolka Jubbada dhexe waxaa ka dhacay xukun Xadu Zina ah oo lagu fuliyay nin fal kufsi ah kula kacay qof dumar ah oo kamid aheyd dadka deegaanka.
0 Monday February 17, 2020 - 11:47:26
Wararka ka imaanaya Koofurta Sudan ayaa sheegaya in uu gudaha wadankaasi ku dhintay Safirki dowlada Kenya u fadhiyay Magalada Jubba oo ah caasimadda Koofurta Sudan.
0 Sunday February 16, 2020 - 09:57:18
"Fircown ma ahayn in uu dadka Muslimiinta ah laayo ee waxay ahayd in uu iskuulo u furo si tartiib ahna uu manhajkiisa uga dhaadhiciyo" fakarkan waxaa muddo hore bixiyay mid kamid ah khubarada reer Galbeedka, isagoo dadkiisa ku guubaabinayay in ay muslimiinta u adeegsadaan Waxbarasho, halkii…
0 Saturday February 15, 2020 - 08:33:58
0 Tuesday February 11, 2020 - 20:19:40
Taliska Booliska dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa walaac ballaaran ka muujiyay ammaanka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
0 Sunday February 09, 2020 - 11:25:35
Weerar hubaysan oo ka dhacay wadanka Thailand ayaa sababay dhimashada labaatameeyo qof iyo dhaawac soo gaaray sodomeeyo kale.
0 Sunday February 09, 2020 - 10:53:47
Magaalada Addis Ababa ee caasimadda wadanka Itoobiya waxaa ka furmay shirkii 33aad oo ay isugu yimideen hoggaamiyaasha Ururka Midowga Afrika iyo dowladaha reergalbeedka ee taageerada siiya.
0 Thursday February 06, 2020 - 20:38:20
« Prev1 ... 3456789 ... 44Next »